Baarlamaanka Uganda oo Feedh iyo Kuraas Raaxada isaga qaaday - Hablaha Media Network
Baarlamaanka Uganda oo Feedh iyo Kuraas Raaxada isaga qaaday
HMN:- Xildhibaanada Baarlamaanka Uganda ayaa maanta isku khilaafay Mooshin laga keenay sharciga xadidaya da’ada musharaxa Madaxweynaha dalka Uganda.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada ay ka xanaaqeen kadib markii la sheegay in mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka mid ah taageerayaasha Madaxweyne Museveni uu la soo galay hub gudaha xarunta baarlamaanka.
Afhayeenka baarlamaanka ayaa amray in la baaro balse wax hub ah waa laga waayay gudaha hoolka shirka sida ay saxafiyiin halkaa ku sugnaa ay sheegeen.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA DAGAALKA DHEX MARAY
Arrinta ku saabsan da’ada Madaxweynaha wadanka Uganda ayaa noqotay mid muddo dheer soo jiitamaysay, iyadoo Madaxweyne Musaveni oo 73 sano jir ah sharciga dalka Ugandana uu dhigayo in da’ada Madaxweynaha inaysan ka weynaan 75 sano jir. Balse Mooshin la horkeenay Baarlamaanka Uganda ayaa lagu doonayay in lagu baabi’iyo guud ahaanba xadka loo sameeyay musharaxa Madaxweynaha dalka Uganda.
Haddii sharcigan sida uu hadda yahay loo daayo Madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaan markiisii afaraad isu soo taagi karin xilka madaxweynaha doorashada la qorsheeyay in ay dhacdo 2021.